कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भावुक हुँदै गरे विदाई ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७७, ३० भाद्र मंगलवार १६:३०
कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भावुक हुँदै गरे विदाई !
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कर्मचारीहरुले विदाई गरेका छन् । कर्मचारीहरुले मंगलबार (आज) एक कार्यक्रमकाबीच घिसिङलाई विदाई गरेका हुन् । घिसिङको गत आइतबार मात्रै चार वर्षे कार्यकाल सकिएको हो । विदाई कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको मार्गदर्शन अनुरुप प्राधिकरणको टिमले काम गरेको कारण सफलता पाएको बताउनुभयो ।
PREVIOUS Previous post: अमेरिकामा कोरोना भाइरस निष्क्रिय पार्ने औषधि बनेको दावी
NEXT Next post: नेपालमा थप १ हजार ४५९ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या ५६ हजार ७८८ पुग्यो